मेरो आईफोन आईट्यून्समा जडान हुँदैन। पीसी र म्याक को लागी वास्तविक समाधान! - अन्य
बटन आईफोन मा काम गर्दैन
मेरो भोल्युम बटन किन काम गर्दैन?
कालो पुतली को अर्थ के हो
मेरो फोन रिस्टार्ट बन्द हुनेछैन
मेरो आईफोन आईट्यून्समा जडान हुँदैन। पीसी र म्याक को लागी वास्तविक समाधान!
तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा आईफोन जडान गर्नुहोस् र आईट्यून्स खोल्नुहोस्, तर तपाईंको आईफोन देखा पर्दैन । तपाईले आफ्नो आईफोन आफ्नो कम्प्युटरबाट अनप्लग गरेर पुन: प्लग इन गर्दै, बन्द गरेर फेरि आइट्यून्स खोल्ने प्रयास गर्नुभएको छ, र तपाई निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईको लाइटनिंग केबलले काम गर्दछ, तर अझै जडान भएको छैन । यस लेखमा म किन यसको व्याख्या गर्नेछु तपाईको आईफोन आईट्यून्समा जडान हुँदैन Y म्याक र पीसीमा कसरी समस्या समाधान गर्ने।
आईफोन / आईट्यून्स समस्या निवारण - कहाँ सुरु गर्ने
गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईंको लाइटनिंग केबल (केबल जसले तपाईंको आईफोन चार्ज गर्दछ) सही ढ working्गले काम गरिरहेको छ। यदि केबलले तपाईको आईफोन चार्ज गर्न काम गर्दछ भने, त्यसो भए राम्रो हुन्छ, तर यो सँधै त्यस्तो हुँदैन। केबलहरू जुन चार्जिंगका लागि कार्य गर्दछ त्यसले डाटा सिंक गर्न काम गर्दैन।
तपाईले सस्तो केबुलहरूमार्फत देख्नुहुनेछ जुन तपाईले स्थानीय स्टोरहरूबाट किन्नु हुन्छ किनभने तिनीहरू एप्पलले उत्पादन गर्ने केबलहरू जत्तिकै उच्च गुणवत्ताका छैनन्। तर सबै गैर-एप्पल केबलहरू कम गुणस्तरका हुँदैनन्, यो कुराले नै फरक पार्छ:
MFi प्रमाणित केबलहरू खोज्नुहोस्
उच्च-गुणवत्ताको बिजुलीका तारहरू छन् MFi प्रमाणपत्रहरू । जब एक कम्पनी एप्पल बाट MFi प्रमाणीकरण को लागी लागू गर्दछ, यो उच्च-गुणवत्ता विशिष्टता र त्यो विशिष्ट केबल को लागी एक अद्वितीय पहिचान चिप प्राप्त गर्दछ। के तपाईंले कहिले सन्देश देख्नु भएको छ ' यो केबल वा सहयोगी प्रमाणित छैन र यस आईफोनको साथ भरपर्दो ढ work्गले काम नगर्न सक्छ तपाईको आईफोनमा? यसको मतलब केबल MFi प्रमाणित छैन र उच्च गुणवत्ताको नहुन सक्छ।
अमेजन उत्कृष्ट बेच्छ MFi प्रमाणित आईफोन केबलहरू तिनीहरूले एप्पलको आधा कि लागत। यदि तपाईं स्टोरमा किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने, बक्समा 'मेड फर आईफोन' लोगो खोज्नुहोस् जुन केबल MFi प्रमाणित हो।
एउटा मौरीले टोक्ने सपना
एकचोटि तपाईंले प्रमाणित गर्नुभयो कि तपाईंको लाइटनिंग केबलले कार्य गर्दछ, तपाईंको कम्प्युटरमा अर्को आईएसबी पोर्टमा तपाईंको आईफोन जडान गर्न प्रयास गर्नुहोस् । USB पोर्टहरू राम्रोसँग लगाउन सक्दछन्, र कहिलेकाँही फरक पोर्ट प्रयोग गर्दा यो समस्या समाधान गर्न पर्याप्त हुन्छ।
यस बिन्दुबाट, समाधानहरू म्याक र पीसीको लागि फरक छन्। विन्डोज पीसीमा कसरी यो समस्या समाधान गर्ने भनेर देखाउँदै म सुरू गर्नेछु। यदि तपाईंसँग म्याक छ भने, तपाईं यस सेक्सनमा स्किप गर्न सक्नुहुनेछ के गर्ने जब तपाईंको आईफोनले तपाईंको म्याकमा आईट्यून्ससँग जडान गर्दैन ।
सब भन्दा साधारण कारण तपाईको आईफोन आफ्नो पीसी मा आईट्यून्स जडान छैन
सब भन्दा साधारण कारण तपाईको आईफोनले तपाईको पीसीमा आईट्यून्स जडान गर्दैन किन त्यो हो को उपकरण चालक यो सहि रूपमा कार्य गर्दैन।
उपकरण ड्राइभर के हो?
A उपकरण चालक (वा केवल एक नियन्त्रक ) त्यो प्रोग्राम हो जसले विन्डोजलाई बताउँछ कसरी तपाइँको कम्प्युटरमा जडित हार्डवेयरसँग अन्तरक्रिया गर्ने वा 'कुराकानी गर्ने'। यदि तपाइँको आईफोन ड्राइभर ठीकसँग काम गरिरहेको छैन भने तपाइँको कम्प्युटरले कसरी तपाइँको आईफोनसँग कुराकानी गर्ने भनेर थाहा पाउँदैन र यो आईट्यून्समा देखा पर्दैन।
ड्राइभरहरूले बिभिन्न कारणहरूको लागि काम गर्न रोक्दछन्, र आईफोनहरू र अन्य उपकरणहरूको लागि पीसीहरूमा यो साझा समस्या हो।
तपाईंको आईफोन उपकरण ड्राइभरको समस्या निवारण
एक पीसी मा, पहिलो कुरा तपाईले गर्नु पर्छ खोल्नुहोस् उपकरण प्रशासक । तपाईंले नियन्त्रण प्यानेलमा यन्त्र प्रबन्धक फेला पार्नुहुनेछ, तर यसलाई पत्ता लगाउने सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको तपाईंको कम्प्युटरको खोजी पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् र 'उपकरण प्रबन्धक' टाइप गर्नुहोस्।
उपकरण प्रबन्धक खोले पछि, ड्राइभरहरूको लागि खोजी गर्नुहोस् USB (युनिभर्सल सिरियल बस) र क्लिक गर्नुहोस् सानो त्रिकोण आइकन जुन दायाँमा छ। एक ड्रप-डाउन मेनू खुल्नेछ र तपाईंले हेर्नु पर्छ एप्पल मोबाइल उपकरण USB ड्राइभर यहाँ सूचीबद्ध।
नोट: यदि तपाईंको उपकरण प्लग ईन गरिएको छ र भित्र देखा पर्दछ मेरो पीसी वा मेरो टीम , तर तपाईं यहाँ कन्ट्रोलर देख्नुहुन्न, चिन्ता नलिनुहोस् - मँ पछि योमा जान्छु।
पीसीमा एप्पल मोबाइल उपकरण USB ड्राइभर फिक्स कसरी गर्ने
यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ भने एप्पल मोबाइल उपकरण USB ड्राइभर तर तपाईंको आईफोनले आईट्यून्ससँग जोड्दैन, ड्राइभरलाई अपडेट गर्न वा मर्मत गर्न आवश्यक पर्दछ। मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् एप्पल मोबाइल उपकरण USB ड्राइभर र तीन विकल्प देखा पर्नेछ: ड्राइभर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस् …, निष्क्रिय गर्नुहोस् Y स्थापना रद्द गर्नुहोस् ।
कन्ट्रोलर सक्षम गर्नुहोस् यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने
यदि तपाईंले विकल्प देख्नुभयो भने सक्षम गर्नुहोस् , haसक्षम गर्नुहोस् , पढ्न जारी राख्नुहोस्।
चालकको स्थापना हटाउनुहोस् र स्थापना रद्द गर्नुहोस्
मैले फेला पारे कि ड्राइभरको समस्या समाधान गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका ड्राइभरको स्थापना हटाउन र पुन: स्थापना गर्नु सब भन्दा सजिलो तरीका हो। ड्राइभर मात्र देखा पर्नेछ यदि तपाईंको आईफोन तपाईंको कम्प्युटरमा जडित छ , त्यसैले यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको आईफोन यस ड्राइभरको लागि खोजी गर्नु अघि जडित छ।
थिच्नुस स्थापना रद्द गर्नुहोस् र विन्डोजले ड्राइभरलाई USB ड्राइभर सूचीबाट हटाउनेछ। अर्को, तपाइँको आईफोन बिच्छेदन गर्नुहोस् र पुन: जडान गर्नुहोस्। जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ, तपाईंको कम्प्युटरले स्वतः तपाईंको आईफोन पहिचान गर्दछ र ड्राइभरको अपडेट गरिएको संस्करण पुन: स्थापना गर्नुहोस्।
पुरानो ड्राइभर एक धेरै सामान्य कारण हो किन आईफोन आईट्यून्समा जडान हुँदैन, त्यसैले यसले समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। खुल्छ आईट्यून्स र आईफोन आईकन को लागी हेर्नुहोस् यदि तपाईको आईफोन जडित छ भने। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको आईफोन हेर्नुहोस् र 'ट्रस्ट' क्लिक गर्नुहोस् निश्चित रूपमा यसलाई देखिन्छ।
किन मँ मेरो फोन मा यूट्यूब भिडियो हेर्न सक्दिन
किन तपाईंले आफ्नो आईफोनमा 'ट्रस्ट' चयन गर्न आवश्यक छ
यो धेरै महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ छुनुहुन्छ विश्वास तपाईंको आईफोनमा, वा यसले तपाईंको कम्प्युटरसँग कुराकानी गर्दैन। यस बिन्दुमा, यदि तपाईंको आईफोनहरू आईट्यून्समा देखिन्छन्, तपाईं जानु राम्रो छ! यदि तपाईंको आईफोन अझै सम्म देखा पर्दैन भने, पढ्नुहोस्।
विकल्प छनौट गर्नुहोस् 'ड्राइभर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस् ...' यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने
यदि तपाइँ छनौट गर्नुहुन्छ ड्राइभर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस् ... मा दायाँ क्लिक पछि एप्पल मोबाइल उपकरण USB ड्राइभर , तपाइँले दुई विकल्पहरू देख्नुहुनेछ: ड्राइभर सफ्टवेयरको लागि स्वत: खोजी गर्नुहोस् Y ड्राइभर सफ्टवेयर को लागी मेरो कंप्यूटर खोज्नुहोस् ।
थिच्नुस ड्राइभर सफ्टवेयरको लागि स्वत: खोजी गर्नुहोस् र विन्डोजले ड्राइभरको अपडेट गरिएको संस्करणको लागि इन्टरनेट खोजी गर्नेछ। यदि तपाईंको कम्प्युटर इन्टरनेटमा जडित छैन भने, तपाईंले क्लिक गर्नु आवश्यक छ ड्राइभर सफ्टवेयर को लागी मेरो कंप्यूटर खोज्नुहोस् - म तपाईंलाई भनिन्छ तलको सेक्सनमा यो कसरी गर्ने कसरी ड्राइभर अपडेट गर्दा समस्या निवारण गर्ने र के गर्ने यदि ड्राइभर हराइरहेको छ ।
यदि तपाईंले चालक देख्नुभएन भने (उपकरण प्रबन्धकमा हराइरहेको)
त्यहाँ दुई कारणहरू छन् एप्पल मोबाइल उपकरण USB ड्राइभर उपकरण प्रबन्धकमा देखाउँदै:
तपाईको आईफोन कम्प्युटरमा जडित छैन। फोल्डर खोल्नुहोस् मेरो पीसी वा मेरो टीम तपाईंको कम्प्युटरमा, र यदि तपाईंले त्यहाँ आफ्नो आईफोन देख्नुभयो भने, अर्को विकल्पमा जानुहोस्।
ड्राइभर देखा पर्दैन वा तपाइँको कम्प्युटरमा स्वचालित रूपमा पुन: स्थापना गर्नुहोस्। यदि तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरबाट ड्राइभर हटाउनुभएको छ र यो देखा पर्दैन जब तपाईं आफ्नो आईफोन पुन: जडान गर्नुहुन्छ, यहाँ यसलाई ठीक गर्ने तरिका यहाँ छ:
जब ड्राइभर देखा पर्दैन, कल गरिएको विकल्प खोज्नुहोस् उपकरण प्रबन्धकमा पोर्टेबल उपकरणहरू । मा क्लिक गर्नुहोस् सानो त्रिकोण आइकन दायाँ तिर पोर्टेबल उपकरणहरू र तपाइँले हेर्नु पर्छ एप्पल आईफोन सूचीमा। यो प्रमाणित गर्ने अर्को तरीका हो जुन तपाईंको आईफोन तपाईंको कम्प्युटरमा जडित छ।
कसरी ड्राइभर अपडेट गर्दै समस्या निवारण गर्ने र के गर्ने यदि ड्राइभर हराइरहेको छ
यस क्षणबाट, समाधान उपकरण व्यवस्थापकमा ड्राइभर र हराइरहेको ड्राइभर अपडेट गर्न समस्याहरूको बिल्कुल उस्तै हो।
यदि ड्राइभर पूर्ण रूपमा हराइरहेको छ भने, दायाँ क्लिक गर्नुहोस् एप्पल आईफोन पोर्टेबल उपकरणहरूमा। छनौट गर्नुहोस् ड्राइभर सफ्टवेयर को लागी मेरो कंप्यूटर खोज्नुहोस् र एक विन्डो स्क्रिनमा देखा पर्नेछ।
यदि तपाईं आफ्नो ड्राइभर अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ भने, मा क्लिक गर्नुहोस् सानो त्रिकोण आइकन दायाँ तिर USB ड्राइभरहरू क्लिक गर्नुहोस् ड्राइभर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस् ... र पछि क्लिक गर्नुहोस् मेरो कम्प्युटर ड्राइभर सफ्टवेयर को लागी ब्राउज गर्नुहोस् ।
किन अभ्यस्त मेरो फोन मलाई आईओएस १० मा अपडेट गर्न दिनुहोस्
कसरी एप्पल मोबाइल उपकरण USB ड्राइभर खोज्ने
पहिले, तपाईंले फोल्डर पत्ता लगाउन आवश्यक पर्दछ जहाँ ड्राइभर तपाईंको कम्प्युटरमा भण्डार गरिएको छ। यसको अर्थ विन्डोमा तलका निर्देशिकाहरू (वा फोल्डर) मा नेभिगेट हुनेछ।
सी: प्रोग्राम फाईलहरू सामान्य फाईलहरू एप्पल मोबाइल उपकरण समर्थन ड्राइभरहरू
चिन्ता नलिनुहोस् - मँ यस प्रक्रियाको साथ मद्दत गर्न यहाँ छु।
तपाइँको कम्प्युटरमा सहि ड्राइभर खोज्दै
'ड्राइभरको लागि मेरो कम्प्युटर ब्राउज गर्नुहोस्' थिच्नाले पप-अप विन्डो खुल्नेछ। 'ब्राउज' छनौट गरेपछि सूची खोजी गर्नुहोस् जबसम्म तपाईंले आफ्नो सी ड्राइभ पाउनुहुन्न। यो पीसी वा यो कम्प्युटरमा यो पहिलो विकल्प हुनसक्दछ।
यदि यो पीसी वा यो पीसी फोल्डर खुल्ला छैन भने, यस पीसीको चिह्न वा यस उपकरणमा क्लिक गर्नुहोस् फोल्डर खोल्न र ड्राइव सी। को लागी तपाईंले OS (C वा C: C जस्ता केही देख्नुहुनेछ। जुनसुकै तरिका पनि, ड्राइभ C मा क्लिक गर्नुहोस्।
तल स्क्रोल गर्नुहोस् जब सम्म तपाइँ फेला पार्नुहुन्न कार्यक्रमका फाइलहरू र फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस् ' कार्यक्रमका फाइलहरू '। त्यसपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस् साधारण फाईलहरू र फेरि क्लिक गर्नुहोस् - तपाइँ यसको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, हैन?
फोल्डर खोज्नुहोस् स्याऊ र क्लिक गर्नुहोस् त्यो बाइन्डर फेरि तल स्क्रोल गर्नुहोस् र खोजी गर्नुहोस् मोबाइल उपकरण समर्थन र तपाईंले अनुमान गर्नुभयो: त्यो फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। अन्तिम चरण: गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् भनिन्छ फोल्डरमा नियन्त्रकहरू यसलाई चयन गर्न। र त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् स्वीकार गर्न ।
तपाईंले एप्पल मोबाइल उपकरण USB ड्राइभर अपडेट गर्न वा हराइरहेको ड्राइभर फेला पार्न सही फोल्डर चयन गर्नुभयो। अब क्लिक गर्नुहोस् अर्को विन्डोमा र त्यसपछि तपाइँले सन्देश सन्देश देख्नुहुनेछ जुन चालक सफलतापूर्वक स्थापना गरिएको छ वा ड्राइभर अब अप टु डेट छ।
यो आईफोन ब्याक अप गर्न सकिदैन किनकि त्यहाँ पर्याप्त आईक्लाउड भण्डारण उपलब्ध छैन
यदि आईफोन अझै देखा पर्दैन भने पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्
यस विन्दुमा, ड्राइभर तपाइँको कम्प्युटरमा सहि रूपमा स्थापित छ। यदि तपाईंको आईफोन अझै यो आईट्यून्समा देखा पर्दैन, मेरो सिफारिश छ कि तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर र तपाइँको आईफोन एकै समयमा पुनः सुरु गर्नुहोस्। तपाईंको कम्प्युटरबाट तपाईंको आईफोन विच्छेदन गर्नुहोस्, यसलाई बन्द गर्नुहोस् र फेरि तपाईंको कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईंको कम्प्युटर फेरि सकिए पछि, आफ्नो आईफोनलाई तपाईंको कम्प्युटरमा पुन: जडान गर्नुहोस् र समस्या समाधान भएको छ कि भनेर हेर्न आईट्यून्स खोल्नुहोस्।
अन्तिम प्रयास: आईट्यून्सको स्थापना हटाउनुहोस् र पुन: स्थापना गर्नुहोस्
हो अझै तपाईं आफ्नो पीसीमा आईफोनलाई आफ्नो आईफोन जडान गर्न सक्नुहुन्न, हामीलाई चाहिन्छ iTunes पूर्ण रूपमा स्थापना रद्द गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंको कम्प्युटरमा iTunes को पछिल्लो संस्करण पुन: स्थापना गर्नुहोस् । तपाईं सक्नुहुन्छ iTunes को पछिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् एप्पल वेबसाइट बाट। जब आईट्यून्सले तपाइँको कम्प्युटरमा स्थापना समाप्त गर्दछ, यो राम्रो विचार हो प्रक्रिया जारी राख्नु अघि आफ्नो पीसी पुन: सुरू गर्नुहोस् ।
ITunes पुन: स्थापना समस्या कसरी ठीक गर्ने?
जब तपाईं आइट्यून्स पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ, यो एक सानो प्रोग्राम स्थापना गर्दछ जुन तपाईंको कम्प्युटरको पृष्ठभूमिमा चल्दछ एप्पल मोबाइल उपकरण समर्थन । यो कार्यक्रम हो धेरै महत्वपूर्ण किनभने ड्राइभर र ईन्टरफेस चलाउनुहोस् जसले तपाईंको आईफोनलाई आईट्यून्समा जडान गर्न अनुमति दिन्छ । एप्पलको मोबाइल उपकरण समर्थन समस्या निवारण गर्नको लागि आइट्यून्सको स्थापना हटाउन र पुन: स्थापना गर्नु उत्तम तरिका हो।
ITunes पुन: स्थापना पछि तपाईंको आइट्यून्स पुस्तकालय पुनर्निर्माण
यदि तपाईं आइट्यून्सको स्थापना रद्द गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले कुनै पनि संगीत वा चलचित्र फाईलहरू गुमाउनु हुने छैन, तर तपाईंले आइट्यून्स पुस्तकालय पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक पर्दछ। चिन्ता नलिनुहोस्, एप्पलसँग एक महान समर्थन लेख भनिन्छ यदि तपाईं आफ्नो म्याक वा पीसीमा आईट्यून्स अद्यावधिक पछि तपाईंको सम्पूर्ण लाइब्रेरी देख्नुहुन्न जो प्रक्रिया को माध्यम बाट तपाईलाई मार्गदर्शन गर्दछ।
यस बिन्दुमा, समस्या समाधान हुनेछ - लेखको अन्त्यमा जानुहोस् समाप्त गर्न र तपाइँको लागि कुन चरणमा काम गरेको थियो त्यसमा टिप्पणी दिन।
बाइबल मा संख्या of को अर्थ
त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् प्रणाली रिपोर्ट ... प्रणाली सूचना अनुप्रयोग खोल्नको लागि।
थिच्नुस USB बाँया र फेला पार्नुहोस् आईफोन ।
म्याकमा समस्या निवारण आईट्यून्स / आईफोन
यदि तपाईंको आईफोन प्रणाली रिपोर्टमा देखा पर्दछ तर आईट्यून्समा देखा पर्दैन भने, तल चरण see हेर्नुहोस्। यदि तपाईंको आईफोन होईन सूचीमा, चरण १ बाट सुरू गर्नुहोस्।
तपाईंको म्याकमा बिभिन्न यूएसबी पोर्ट प्रयोग गर्नुहोस्।
एक फरक लाइटनिंग केबल प्रयास गर्नुहोस्।
तेस्रो-पक्ष सुरक्षा सफ्टवेयर असक्षम गर्नुहोस्। (सुरक्षा सफ्टवेयर कहिलेकाँही हुन सक्छ पनि आक्रामक र तपाईंको आफ्नो USB उपकरणहरू तपाईंको म्याकमा जडान हुनबाट रोक्नुहोस्)।
ITunes मा लक फोल्डर पुनःसेट गर्नुहोस्। यस समर्थन लेख जाँच गर्नुहोस् कसरी तपाईंको म्याकमा लकडाउन फोल्डर रिसेट गर्ने यो कसरी गर्ने सिक्नको लागि।
तपाईको आईफोन फेरि फेला पर्दछ!
राम्रो काम! यस बिन्दुमा तपाईको आईफोन आइट्यून्समा फेरी देखा पर्‍यो। म शर्त गर्दछु कि तपाईंले कहिले सोच्नु भएन कि फेरि आईट्यून्समा त्यो सानो आईकन आईकन देखेर तिमी खुशी हुनेछौ! कारणहरू फिक्स गर्दै किन आईफोन आईट्यून्ससँग जडान हुँदैन सधैं सजिलो हुँदैन र तपाईं पछाडि प्याटको योग्य हुनुहुन्छ। अब तपाईं आफ्नो आईफोनलाई सि sy्क र ब्याकअप गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईंलाई भविष्यमा यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु आवश्यक छ भने। मलाई जानकारी दिनुहोस् कि तलको टिप्पणी सेक्सनमा कुन समाधानले तपाईंको लागि काम गर्यो।